Princess Cruises Australia - ဒီနှစ်အောက်မှာမဆင်းတော့ဘူး
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » သြစတြေးလျသတင်းစဉ် » Princess Cruises Australia - ဒီနှစ်အောက်မှာမဆင်းတော့ဘူး
သြစတြေးလျသတင်းစဉ် • နိုင်ငံတကာသတင်းများ • ဒီလိုမြင်ကွင်း • သတင်း • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • ခရီးသွားလာရေးဟောပြောချက် • သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားလျှို့ဝှက်ချက်များ • သတင်းမျိုးစုံ
Princess Cruises သည်ယခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိသြစတြေးလျနိုင်ငံ၏အပျော်စီးအားလပ်ရက်များကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ယခင်သင်္ဘောများအမြောက်အများကိုဖျက်သိမ်းပြီးသည့်နောက်၎င်းသည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ဖျက်သိမ်းထားသောခရုဇ်တွင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ည့်သည်များကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်အလားတူသင်္ဘောဖြင့်ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
guests ည့်သည်များနောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအနာဂတ်ခရုဇ်ခရက်ဒစ်ကို ၁၀၀ ရာနှုန်းပေးဆောင်ရမည့်အပြင်ခ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထပ်အပိုထပ်ဆောင်းအပိုဆုကြေးနှင့်ညီမျှသည်။
ကြိုတင်မှာကြားထားသူမည်သူမဆို, 31 ဇူလိုင်လ 2021, XNUMX သို့ပြန်အမ်းသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်တောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်းကပြောကြားရာတွင်ဒေသတွင်းရှိအပန်းဖြေအားလပ်ရက်များပြန်လည်စတင်ရန်အချိန်ကာလနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာမှုများကြောင့်၊ မင်းသမီးသည် ၂၀၂၁၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်မှသြစတြေးလျသို့ထွက်ခွာခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းများကိုပယ်ဖျက်နေသည်ဟုဆိုသည်။
ပယ်ဖျက်ထားသောသင်္ဘောပေါ်တွင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင် guests ည့်သည်များအတွက်၊ Princess သည် 2022 ည့်သည်များကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင်အလားတူအပျော်စီးသင်္ဘောသို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့် guests ည့်သည်များသည်အနာဂတ်ခရုဇ်ခရက်ဒစ် (FCC) ကိုရွေးနိုင်သည့်ခရုဇ်ခ၏ ၁၀၀ ရာနှုန်းနှင့်အပိုထပ်ဆောင်းငွေပြန်အမ်းမယူသောအပိုဆုကြေး FCC ကိုပေးဆောင်ခနှုန်းထားခ (အနည်းဆုံး US $ 2021) သို့မဟုတ်မူလသို့ပြန်အမ်းငွေရွေးနိုင်သည် ငွေပေးချေမှုပုံစံ။
တောင်းဆိုမှုများကိုတဆင့်လက်ခံရရှိရမည်ဖြစ်သည် အွန်လိုင်းပုံစံ by ဇူလိုင်လ 31, 2021 သို့မဟုတ် guests ည့်သည်များအလိုအလျောက် FCC option ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ FCC များကို ၂၀၂၂၊ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်နှင့်ရွက်လွှင့်သည့်မည်သည့်သင်္ဘောမဆိုတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အပျော်စီးသင်္ဘောများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခရီးသွားအကြံပေးမှသော်လည်းကောင်း၊ 1-800-PRINCESS သို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်းကြိုတင်မှာကြားနိုင်သည်
(1-800-774-6237), ဒါမှမဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုဒ်.
ဤဖျက်သိမ်းမှုကြောင့်ထိခိုက်သောကြိုတင်ဘွတ်ကင် guests ည့်သည်များအတွက်လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ FCCs နှင့်ပြန်အမ်းငွေများနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ထပ်အချက်အလက်များကိုအွန်လိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် သက်ရောက်မှုနှင့်ဖျက်သိမ်း Cruises အပေါ်သတင်းအချက်အလက်.
မင်းသမီး Cruises ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဤသို့ပြောခဲ့သည် -
များစွာသောဘဝကဏ္facများကဲ့သို့ပင်ခရီးသွားခြင်းသည်မကြာသေးမီဖြစ်ရပ်များကြောင့်ပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင်္ဘောလုပ်ငန်းများကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားရန်မင်းသမီးခရုဇ်သည်အလွန်ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည့်အတွက်အလွန်ပင်စိတ်သောကရောက်သည်။ မင်းတို့ငါတို့နဲ့အတူရွက်လွှင့်ဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ ပုံမှန်လျော်ကြေးပေးခြင်းကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရန်သင်မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုမှမလိုအပ်ပါ။ သင့်လျော်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ရွက်လွှင့်မည့်နေ့စွဲနှင့်လိုက်ဖက်သော link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရှာဖွေနိုင်သည်။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာက မင်းသမီး Cruises ကြေငြာခဲ့သည် ၂၀၂၁၊ စက်တင်ဘာ ၂၅ မှနို ၀ င်ဘာ ၂၈ ရက်အကြား Princess Medallion Class သင်္ဘောရှစ်စီးပေါ်မှအပျော်စီးသင်္ဘောများသည်ကာရစ်ဘီယံ၊ ပနားမားတူးမြောင်း၊ မက္ကဆီကို၊ ဟာဝိုင်ယီနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားကမ်းခြေသို့ once ည့်သည်များအားတစ်ဖန်ပြန်လည်ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။
ယခင်ကဖျက်ခဲ့သော Princess Cruise ခရီးစဉ်များစာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
TSA နှင့် Delta ၏ပူးပေါင်းမှုသည်စစ်ဆေးမှုများကိုချောမွေ့စေသည်။
ပုဂ္ဂလိက အစုရှယ်ယာ သဘောတူညီချက်များသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ခရီးသွားလာရေးကို တွန်းအားပေး...
Sandals Resorts သည်ခရီးသွားအစီအစဉ်များအတွက်စိတ်ပူပန်စေသည်။
SãoToméနှင့်Príncipeတို့သည်အာဖရိကမှဒေါ်လာ ၁၀.၇ သန်းရရှိသည်။
အမှတ်တံဆိပ် USA သည်အိန္ဒိယကို၎င်း၏ Virtual Radar ပေါ်တွင်ထားရှိသည်
Generac Mobile မှကြေငြာသောဒီဇယ်မီးစက်အသစ်များ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကြောင့်ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့အမျိုးသား ...
IATA: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေကြောင်းကုန်တင် ၀ ယ်လိုအားသည်ကြီးထွားနိုင်စွမ်းထက်သာလွန်သည်